News - Teflon ဖန်မျှင်ထည်ပစ္စည်းအသစ်များ
Teflon ဖိုင်ဘာဖန်ထည် အထူး (သံ) ဖလိုရင်းအပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်သည့်ဆေး (welding) အထည်ဟုလည်းလူသိများသော teflon coated glass fiber အထည်ဟုခေါ်တွင်သည်။ polytetrafluoroethylene (ပလပ်စတစ်ဘုရင်ဟုလူသိများသော) emulsion အားကုန်ကြမ်းများအဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖန်ထည်အမျှင်ဖြင့်တပ်ဆင်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးဘက်စုံပေါင်းစပ်သောပစ္စည်းများ။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်လေကြောင်း၊ စက္ကူ၊ အစားအစာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ အဝတ်အထည်၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဖန်၊ ဆေး၊ (အမိုးအမြှေးပါးဖွဲ့စည်းပုံအောက်ခြေအထည်), ကြိတ်ဘီးအချပ်, စက်ယန္တရားများနှင့်အခြားလယ်ကွင်း။
1. -196 350 နှင့် 350 between အကြားမြင့်မားသောအပူချိန်အကြားအနိမ့်သောအပူချိန်မှာအသုံးပြု 1. ။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပြီးအိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လက်တွေ့ကျကျအသုံးချခြင်းအားဖြင့်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ တွင် ၂၅၀ at အပူရှိန်မြင့်မားစွာထားရှိပါကခွန်အားကိုလျှော့ချနိုင်ရုံသာမကအလေးချိန်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၃၅၀ hours နာရီတွင်နာရီပေါင်း ၁၂၀ အတွင်းနေရာချထားလျှင်၊ အလေးချိန်သည် ၀.၆% သာလျော့နည်းသည်။ -180 ℃အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်သည်မူရင်းနူးညံ့မှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။
၂။ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုလိုက်နာရန်မလွယ်ကူပါ။ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုလိုက်နာရန်မလွယ်ကူပါ။ ရေမျက်နှာပြင်အစွန်းအထင်းများ၊ အစွန်းအထင်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကပ်လျှက်ပါရှိသည်။
4. နိမ့်ပွတ်တိုက်မှုကိန်း (0.05-0.1) ရေနံ - မိမိကိုယ်ကိုချောဆီကိုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
6 ~ 13% အထိ 5. အလင်းထုတ်လွှတ်။
မြင့်မားသော insulator တွင်လည်းစွမ်းဆောင်ရည် 6.with (သေးငယ်တဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်: 2.6, 0,0025 အောက်မှာတန်းဂျ), Anti-ULTRAVIOLET, Anti- ငြိမ်။
7. ကောင်းသောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှု (elongation ကိန်း5less ထက်နည်း) မြင့်မားသော strength.Good စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ။
၁။ Anti-Stick Lining၊ gasket, cloth and conveyor belt; အခြောက်ခံစက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသောအမျိုးမျိုးသောအခြောက်ခံစက်များပေါ်တင်သည့်ခါးပတ်၊ ကော်ခါးပတ်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအစရှိသည်။
၂။ ပလက်စတစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပလပ်စတစ်ပြား၊
၃။ မြင့်မားသောလျှပ်စစ်ကာကွယ်ခြင်း - အခြေခံအားဖြင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာခြင်း၊ နဂိုအတိုင်းဖြစ်မှု၊ gasket နှင့် liner ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ကြေးနီပြား။
၄။ အပူခံနိုင်သည့်အပေါ်ယံအလွှာ၊ အလွှာအလွှာ၊
၅။ မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖို၊
၆။ ကော်ခါးပတ်၊ အပြာရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဇယားကွက်အပြောင်းအလဲ၊ ရာဘာပြန်ကျောပေးသည့်ကော်ဇော၊ ခါးပတ် vulcanized conveyor belt၊
7. ဖိအား - အထိခိုက်မခံကော်တိပ်အခြေစိုက်စခန်းအထည်။
၈။ ဗိသုကာဆိုင်ရာအမြှေးပါးပစ္စည်းများ - အမျိုးမျိုးသောအားကစားနေရာများ၊ ဘူတာရုံတဲများ၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊
၉။ ရေနံဓာတုဗေဒပိုက်လိုင်းများကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစွန့်ပစ်ခြင်းစသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည်။
၁၀။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးစက်၊ ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း၊ ကြိတ်ခွဲစက်။
၁၁။ Anti-static အထည်ကိုအထူးပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လူမီနီယံဖန်မျှင်ထည်အထည်, Acrylic Coated ဖန်မျှင်ထည်, Acrylic ဖန်မျှင်ထည်အထည်, Pu Coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်, Acrylic Coated Fiberglass အထည်, ဖန်ထည် Fiberglass,